Hotel Transylvania2(2015) – Burmese Subtitle
IMDB: 6.7/10 104,614 votes
2012 က အောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့လို့ အခုသူ့ရဲ့နောက်ဆက် 2015မှာ Part 2အနေနဲ့ထပ်ထွက်လာတဲ့ Animation ကားလေးတစ်ခုကို တင်ပေးပါရစေ။IMDb Rating7အထိရရှိထားပြီးတဲ့ ဒီကားလေးကို အားလုံးပဲမျှော်လင့်နေကြမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ မကောင်းဆိုးဝါးလေးတွေနဲ့ဇာတ်လမ်းစထားခဲ့ပြီး . Draculaဘုရင်တစ်ပါးရဲ့သမီးလေးနဲ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ လူသားတစ်ဦးတို့ရဲ့ အချစ်မေတ္တာနဲ့ ပေါင်းစပ်လက်တွဲမှုကို အချက်ကျကျသဘောကျဖွယ် ဖန်တီးထားပါတယ်။
Part 1 မှာ ချစ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Dracula မလေး Mavis နဲ့လူသားလေး Jonathan တို့ရဲ့ လက်ထပ် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကနေစထားပါတယ်။ Mavis နဲ့ Jonတို့ဟာ လက်ထပ်ပြီးကာလတစ်ခုမှာ သားလေး တစ်ယောက်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ဒီဇာတ်ကားမှာတွေ့ရမှာက အဘိုးဖြစ်သူ Count Dracula ရဲ့ သူ့ မြေးလေးအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို လှလှပပဖွဲ့နွဲ့သွားခဲ့ပြီး သူ့လိုပဲမြေးလေးကိုမှော်အတတ်တွေကျွမ်းကျင်တဲ့ Dracular လေးတစ်ဦးဖြစ်စေချင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါမယ်။ Spoiler ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ဇာတ်ကားအကြောင်းကို ဆက်လက်မပြောပြတော့ပါဘူး Movie သာဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါ။
ခေတ်နဲ့လျော်ညီအောင် တင်ဆက်ထားပြီး . Sony Entertainment ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် Sony Product များကိုပါ သုံးနှုန်းသွားတာဟာ ကြော်ငြာတဲ့ဘက်ကိုမသိသာစေဘဲ ဟာသအဖြစ်နဲ့တင်ဆက်နိုင်ခဲ့တာပါ ဒီဇာတ်လမ်းကိုရေးသားခဲ့တဲ့ Robert Smigel နဲ့ Adam Sandler တို့ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့လက်ရာတစ်ခုပါပဲ။ ဇာတ်ကားရဲ့အသံပိုင်းဆိုင်ရာQualityဟာကောင်းလွန်းတာကြောင့် ကျွန်တော် Encoded လုပ်ရာမှာမူရင်း Sound Qualityကိုမကျအောင်အထူးသတိထားပြီးလုပ်ပေးထားပါတယ်။အဲ့အတွက် Sound Box ကောင်း၂ Speaker ကောင်း၂ရှိသူများကတော့ အိမ်ခန်းထဲမှာတင်ရုပ်ရှင်ရုံမှာကြည့်နေရသဖွယ်ခံစားစေရပါမယ်။ ဒါရိုက်တာ Genndy Tartakovsky ရိုက်ကူးထားပြီးရုံတင်ပြသခဲ့ချိန်မှာလည်းအောင်မြင်တဲ့ကား
အဲ့ထက်ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက အသံပိုင်းဆိုင်ရာသရုပ်ဆောင်များပါပဲ . ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ ၂ ဦးလုံးဟာဇာတ်ညွှန်းရေးပေးရုံမကဘဲ Count Dracula နေရာမှာ Adam Sandler ကသရုပ်ဆောင်ပြီး . Jonathan နေရာမှာ Robert Smigelတို့ကသရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ယောက်
ကတော့ 2012 Part 1 ထွက်တုန်းက ကျွန်တော်တို့လုံးဝသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ Dracula မလေး Mavisရဲ့ နေရာကိုအသံသရုပ်ဆောင်ပေးတာဟာ မင်းသမီးချောလေး Selena Gomez ပါပဲ။
( ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကို San Win Maung မှ ရေးသားပေးထားပါတယ် )
Aaron LaPlante Adam Sandler Allen Covert Andre Robinson Andy Samberg Asher Blinkoff Audrey Wasilewski Ava Acres Brian T. Delaney Bridget Hoffman Carter Sand Chris Kattan Chris Parnell Cole Sand Dana Carvey David Cowgill David Spade Debra Wilson Eva Bella Fran Drescher Fred Tatasciore Grant George Gunnar Sizemore Jaeden Bettencourt Jared Sandler Jess Harnell Jessica Gee-George Jim Wise Jon Lovitz Jonny Solomon Joseph Sanfelippo Kari Wahlgren Keegan-Michael Key Kevin James Kirk Thornton Lex Lang Logan Kishi Luenell Lynnanne Zager Matthew Wolf Megan Mullally Megan Richie Mel Brooks Melendy Britt Melissa Sturm Mia Sinclair Jenness Michael-Leon Wooley Molly Shannon Mona Marshall Nicholas Guest Nick Offerman Nick Swardson Paul Brittain Rob Riggle Robert Smigel Rose Abdoo Sadie Sandler Selena Gomez Stephen Apostolina Steve Blum Steve Buscemi Sunny Sandler Todd Haberkorn
Option 1 Gdrive.bsurls.xyz 1.4 GB BLu-Ray 6CH
Option2Drive.bsurls.xyz 1.4 GB BLu-Ray 6CH
Option3Mega.nz 1.4 GB BLu-Ray 6CH
Option4Mediafire.com 1.4 GB BLu-Ray 6CH
Option5Mshare.io 1.4 GB BLu-Ray 6CH
Option6Usersdrive.com 1.4 GB BLu-Ray 6CH
Option7Mirrorace.com 1.4 GB BLu-Ray 6CH
Aladdin (1992) 1992
The Addams Family (2019) 2019
Doraemon the Movie: Nobita’s Treasure Island (2018) 2018
Marvel Rising: Secret Warriors (2018) 2018
Puss Gets the Boot (1940) 1940
Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (2012) 2012
Madagascar: Escape2Africa (2008) 2008